Tarsan: Muqdisho waxaa ka muuqda argagax amni oo aan jirin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Gudoomiyahii hore ee gobalka Banaadir, haatana ah gudoomiyaha Xisbiga Cadaalada Bulshada, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ammaankeeda aan lagu sugi karin dhagxaan iyo biro la dhigo wadooyinka qaar iyo Hoteelada.
Maxamamuud Ahmed Nuur ayaa sheegay in magaalada Muqdisho uu xilligaan ka muuqanayo argagax aad u badan oo dhanka amaanka ah, isaga oo tilmaamay in hadda cid walba oo Hotel ama ganacsi sameysanaysa doonayso in dhagxaan ay dhigato.
“Anaga xilligii aan tala haynay Qaramada Midoobay ayaan ka diidnay in wadada xirtaa illaa madaxweynaha ay uga tageen, marka dhagax iyo biro meel la dhigay amaanka ma sugaan” ayuu yiri Tarsan oo u warramay Goobjoog FM.
Sidoo kale Tarsan ayaa sheegay in tani ay ka dambeeyaan sida uu sheegay dad doonaya in magaalada Muqdisho amaan ahaan loo arko mid aan wanaagsaneen, waxaana uu ka digay in magaalada laga abuuro qalqal amni oo xilligaan aan jirin.
Amaanka magaalada Muqdisho ayuu sheegay inuu yahay mid hagaagsan, balse dadka qaar doonayaan in dadka laga dhaadhicyo inuusan amaan jirin.
Inta badan hoteellada waaweyn, xarumaha dowladda iyo hay’adaha Qaramada Midoobay ee Muqdisho ayaa waxaa lagu xeendaabay dhagxaan waaweyn, iyagoo qaarkood loo xiray waddooyin.